Saxeex guuleyste ah oo ka sameysan biraha birta ah ee biraha birta ah ee birta ah ee birta ah ee Uzbekistan
9th JUN 2020, xafladda saxiixa mashruuca birta birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah ee Samarkand lagu qabtay Samarkand Distillery. U bood noqoshada lamaanaha cusub. Mashruucani waa natiijo wax ku ool ah oo iskaashiga saddexda dhinac ku saleysan sanado badan oo iskaashi ee glas ...
Wax soosaarka guuleysta ee mashiinka buuxinta ee Myanmar
The 12000BPH Whiskey buuxinta khadadka ee Myanmar oo ay dhistay SHANDONG JUMP GSC CO., LTD, ayaa la soo saaray wax soo saarka on 15th Jan 2020. Mashruucan waxaa lagu dhisay warshad ugu weyn ee Whiskey ee MYANMAR. Awoodda aragti ahaaneed ee mashruucani waa 12000BPH, iyo awoodda dhabta ah sidoo kale ...
Kadib musiibadii Covid- 19 wali waxay ilaalinaysaa awooda wax soo saar si ay macaamiisha ugu hesho silsilad sahayda oo deggan.
Si lama filaan ah COVID-19 sanadkii 2019 waxay musiibooyin aan la saadaalin karin u horseeday dadka adduunka oo dhan, taasoo keentay in warshado badan oo adduunka ah ay si ku meel gaar ah u xirmaan. Shirkadaha jilayaasha ee aan hadda u adeegnay sidoo kale si qoto dheer ayey u saameeyeen. Iyo shirkado badan oo Shiinaha ka mid ah ma awoodi doonaan inay sii wadaan wax soo saarka ...
Jar Kaydinta Saliida Olive, Dhalo Saliid Cagaaran, Dhalo Saliid saytuun ah, Saliida Zeytuunka Iyo Khamriga Qamriga, Dhalada Saliida Saliidda ah ee 250ml, Dhalo Saliid saytuun ah,